သင်၏ Mac နှင့် iPad ကို Mac အတွက်ကီးဘုတ်အဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
သင်၏ Mac သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ကိုသင်၏ Mac အတွက်ကီးဘုတ်အဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial
'Mobile Mouse Remote' သင့်ရဲ့ iOS device ကိုသင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC အတွက်အစွမ်းထက်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်း Mouse Remote မောက်စ်သို့မဟုတ် trackpad အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် သင့်ကွန်ပျူတာအတွက်သင့်အနေဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သည် အဝေးထိန်း သင်၏အဖွဲ့အတွက်၊ သို့သော်၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများစွာရှိသည် built-in ကီးဘုတ် သင်၏ Mac တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ app ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြပါလိမ့်မည် သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှနေ၍ သင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC ပေါ်တွင်ကီးဘုတ်အမိန့်များကိုရိုက်နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
2 QWERTY ကီးဘုတ်
4 အဆိုပါဂဏန်း keypad
5 Remote Mobile Mouse ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်၏ Mac (သို့) PC ပေါ်တွင်ကီးဘုတ်တစ်ခုအနေဖြင့် iOS device ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အချို့ အင်္ဂါရပ်တွေ ငါဒီ application ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားလို့ရတယ် \_ t
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Mobile Mouse တွင်aအခြေခံ QWERTY ကီးဘုတ်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ် ဦး ပါဝင်သည် ပေါင်းစည်းဂဏန်း keypadနှင့်ကီးဘုတ်သော့များအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည့်ကီးဘုတ်တစ်ခု ဖြတ်လမ်းများနှင့်မြားသော့.
ကီးဘုတ်သည်ခလုတ်များနှင့်သာအကြားဆက်သွယ်နိုင်သည် U, I, O နှင့် P ခလုတ်များအထက်တွင်ရှိသည် (အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ) ထို့အပြင်ဂဏန်းခလုတ်ပါပါဝင်သည် ရွေးစရာများကိုကူးယူ၊ ဖြတ်ကူးပါအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ကီးဘုတ် QWERTY Integrated တွင် iOS keyboard မှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်တူညီသောသော့များပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်သင်၏ iOS keyboard မလုပ်ဆောင်သောသင်၏ Mac ကိုထိန်းချုပ်ရန်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည် command နှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည်အခြားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအကြား။
ကီးဘုတ်တွင်လည်း၎င်းပါဝင်သည် F1 မှ F12 ကိုအဖြစ် Escape၊ Delete၊ Home နှင့် End သော့များ။ အဆိုပါ လေး Multi- directional မြှားသော့အပြင်နှင့်အောက်ကိုလည်းသင့်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသည်။
QWERTY ကီးဘုတ်နှင့်သင်ကဲ့သို့၎င်းကိုသင်ရရှိနိုင်သည် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် command ကိုသော့အဖြစ် shift key။ ၎င်းသည်သင် keyboard command များလုပ်ဆောင်သောအခါအသုံးဝင်သည် သင်၏ Mac ပေါ်တွင်အချို့သော function ကိုမြွက်.
Mobile Mouse Remote Numeric Keypad သည်သင်၏ Mac တွင် Numeric Keypad ရှိရန်အသုံး ၀ င်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အက်ပဲလ်သည်မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းမှဖယ်ရှားလိုက်သော၎င်း၏အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ desktop ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သာကမ်းလှမ်းသည်၊ သင်တစ် ဦး ၏အဆင်ပြေနိုင်ပါသည် ဂဏန်း keypadMacBook, MacBook Air နှင့် MacBook Pro များတွင်ပင်ပါဝင်သည် စာသားကိုကူးယူရန်၊ ဖြတ်ရန်နှင့်ကူးရန်အသုံးဝင်သောဖြတ်လမ်းများနှင့် ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးထောက်ခံသည့်အပလီကေးရှင်းများတွင်ဖိုင်အသစ်များကိုဖန်တီးပါ.
Remote Mobile Mouse ကိုအသုံးပြုခြင်း
မိုဘိုင်း Mouse သင်၏အိမ် Wi-Fi ကိုသုံးပါ iOS device ကို Mac သို့ PC သို့ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း in-app ဝယ်ယူမှုဖြင့်၎င်းကိုအခြားဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Bluetooth၊ အုပ်စုတူအဆင့်တူနှင့် USB ဆက်သွယ်မှု.
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆာဗာ application ကို download လုပ်ပါ သင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC ရှိ Mobile Mouse, သင်ဤကိုနှိပ်ပါ လင့်ခ် သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏ iPhone, iPod Touch သို့မဟုတ် iPad ကိုအသုံးပြုရန်။ Isaအခမဲ့ downloadMobile Mouse Remote application ကို App Store တွင် ၀ ယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးယူရို ၁.၉၉ တန်ဖိုးရှိသည်။
သင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC ပေါ်တွင်သင်၏ iOS ကိရိယာကိုကီးဘုတ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ App Store တွင်ကီးဘုတ်ကိုအဝေးမှသုံးရန်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်ဤ app သည်ဒေါ်လာ ၁.၉၉ သာရှိသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကထောက်ခံပါတယ်။
'Mobile Mouse Remote' ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: RPA Tech မှ, INC ။
compatibilityiOS 6.1 နှင့်အထက်လိုအပ်သည်။ iPhone, iPad နှင့် iPod touch နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
app ကိုဝယ်ပါ 'Mobile Mouse Remote' တိုက်ရိုက်ကနေ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုးအောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » သင်၏ Mac သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ကိုသင်၏ Mac အတွက်ကီးဘုတ်အဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
Mac အတွက် Steam တွင်ရရှိနိုင်သော Youtubers Life